ဆူရှီ အစားများရင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ဆူရှီ အစားများရင်
Posted by ဆူး on Sep 26, 2010 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 19 comments
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ငါးအစိမ်းတွေနဲ့ လုပ်တဲ့ ဆူရှီးကို နှစ်ရှည်လများစားသုံးပြီး ဒီလိုမျိုးရောဂါဖြစ် ကြတာပါ …. အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ ..
ဲဒါကတော့ ဦးခေါင်းပိုင်းမှာပါ အဲဒီလူဟာ ဆူရှီးဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး အရမ်းနှစ်ခြိုက်ပါတယ်။ ပင်လယ်ငါးအငန်ပါတဲ့ ဆူရှီးကို နှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပါပြီ။ ထို့နောက်ပိုင်း ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာစွဲကပ်လာခဲ့ပါ တယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းလဲမသိ ဘယ်လိုမှလဲ အဖြေရှာမရခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံး မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ဆေးရုံမှာ သွားရောက်အစစ်ခံခဲ့ပါတယ် ဆေးရုံရောက်လို့ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဓာတ်မှန်က ဖော်ပြချက်အရ ဦးနှောက်အတွင်းမှာ မဲမဲအရာများရှိနေတဲ့အတွက် ဆက်လက်စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို စမ်းသပ်နေဆဲမှာပဲ ဦးခေါင်းပေါ်မှာ ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့လောက်ကောင်လေးတကောင် ကျလာတာကို ဆရာဝန်တဦးက တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုးခွဲစိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ ပင်လယ်ငါး သို့မဟုတ် ငါးတွေအတွင်းမှာ ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ် tapeworms and roundworms လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးတွေဟာ သူတို့ဥတွေလဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို သေစေဖို့အတွက်4deg C –0deg C အအေးခန်း သို့မဟုတ် အလွန်ဆူပွက်နေတဲ့ ရေအတွင်းမှာသာ သေစေနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘယ်လို ရောက်သွားလဲတော့ မသိဘူး။ စားတာများလို့ ရောက်သွားတာလား မသိဘူး။
အခုက မြန်မာ ပြည်မှာ ကိုရီးယား ခေတ်ဖြစ်နေတော့ ဆူရှီကို လူတွေ တော်တော် စားလာကြတယ်။ သတိပြုမိအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အခု ပြန်ပြီး ရှာဖွေ လေ့လာကြည့်တော့ အဲဒီ လူက လူသေကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်း မရိတ်ထားတဲ့ အတွက် အရှင်မှာ ခွဲကြည့်တာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
နောက်ထပ် သံကောင် တုတ်ကောင် ဆိုတာကို တင်ထားပါတယ်။ ခေါင်းထဲမှာတော့ မဟုတ်ဘူး ဗိုက်ထဲက ထွက်နေတာပါ။
ပြောလို့သာ ပြောတာ အဲဒီ ပုံကြီးက တမျိုးကြီးဘဲ ရင်ထဲမှာ အော်ကလီဆန်တယ်။ ပုံမိုလို့ဘဲ လှုပ်နေရင်တော့ ရွစိရွစိနဲ့ တော်တော် အသည်းယားဖို့ ကောင်းမှာဘဲ။
အဲ့လိုဆို အဲ့လူတော့ သေပြီထင်တယ် ….. ဦးနှောက်ထဲမှာ ပိုးတွေအဲ့လောက်များနေတာ … ဆူရှီကိုပဲ အလုံးစုံပုံချလို့လည်းမရပါဘူး … ဆူရှီကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆို အခုလိုဖြစ်တာအတော်များများတွေ့မှာပေါ့
အစိမ်းစားတာဆို တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှစ်နဲ့ချီပြီး စားခဲ့တာဆို ပိုဆိုးမှာပေါ့။
ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ……ဆူရှီ လုံးဝ စားချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး….
ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်… အန်ချင်စရာကြီးဗျာ..
မြန်မာတွေ အခုတလော ဆူရှီခေတ်ထလာလို့ ဆူရှီအကြောင်း၊ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ ဘာသာပြန်ပြီးတင်မလို့ ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ အကြံပေးပါဦး။ တင်ရမလား။ မတင်ရဘူးလား။
လူတိုင်း ကိုယ်စီ အခွင့်အရေး ရှိကြသည်။ တင်ချင်တင်ပါ။ တင်တော့လည်း ဗဟုသုတတောင် တခု ပိုတိုးတာပေါ့။
ကိုယ်ပိုင် ဘလော့မှာ ကူးယူချင်တယ်
အခုခေတ်က ဆူရှီခေတ်၊ (ဆူရှီတောင် ဘူဖေးဆူရှီခေတ်) ဆိုတော့
ကျနော်က တော့ အစ်ိမ်းဆို အသီးအရွက်ကလွဲရင်ဘာမှမစားဘူး။
အသားကိုအစိမ်းစားတာ လူယဉ်ကျေးမူ့မရှိခင် အရိုင်းအစိုင်းဘ၀ကသာစားတာလေ။
အားပါးပါး …………………. ။ ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာသာ အဲလိုဖြစ်ခဲ့ရင် ဆိုပြီးတွေးကြည့်လိုက်တော့…..
ခေါင်းထဲက ယားကျိယားကျိနဲ့ ကုတ်လို့လဲ မရ ….။ eek !!!! ဆူရှီ ကို သားသား လုံးဝလုံးဝ မစားတော့ပါ….
ခေါင်းယားမှာတော့ မဟုတ်ဘူး.. ခေါင်း ကိုက်နေမှာ နေလို့ မရလောက်အောင်ကို ကိုက်ပြီး မူးနောက်နေမှာ
ကျွန်နော်ကတော့ ဆူရှီမကြိုက်ဘူး၊ ဆာရှီမီပဲ ကြိုက်တယ်။ အဲဒီပိုလောက်လန်းတွေက ဆန်ထဲကလာတာ ဖြစ်နိုင်လို့ ဆာရှီမီစားတာ ပိုအန္တရာယ် ကင်းပါလိမ့်မယ်။
ဆူးကတော့ ဆန်ထဲက လို့ မထင်ဘူး ဆန်ကို အာရှတိုက်က လူတိုင်းစားနေကြတာ ပြီးတော့ ဆူရှိက ဆန်က ချက်ပြီးသားထမင်း ဖြစ်နေပြီလေ.. ငါးအစိမ်းက ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ . . . ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ် မစားရဲတော့ဘူး . . .
ကြောက်စရာကြီး…နောက်များတော့ ဆူရှီဆို ဝေးဝေးကရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဓာတ်ပုံကိုကြည့်တာနဲ့တင် တော်တော်ကြောက်နေပြီ .. ဆူရှိကိုအရမ်းကြိုက်တာ .. အခုတော့ မစားရဲတော့ဘူး ..
အောက်က လေ့လာချက်အရဆိုရင်တော့ ဒီအကြောင်းက အစစ်အမှန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ကျုပ်အတွေ့အကြုံအရလည်း အစစ်မဟုတ်လောက်ပါဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
ဘယ့်နှယ်..ဂျပန်လူမျိုးဆိုတာ ကမ်ဘာမှာအသက်အရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီး တနိုင်ငံလုံး..စုရှိ၊ ဆာရှိမိ စားကြတာကိုးနော..။ ဖြစ်သာဖြစ်ရင် တနိုင်ငံလုံး ခေါင်းကိုက်သေရောပဲမဟုတ်လား..။
ကြိုက်သူတွေ စားသာစားကြပါခင်ဗျား။ အားရပါးရသာ ဆက်လက်စားတော်မူကြပါ။ (ငါးကို ရေမဆေးပဲ အကောင်လိုက်တော့ မြိုမချနဲ့ပေါ့နော..)
ဒါမှမဟုတ်..အမေရိကန် စုရှိရွေးစားပေါ့။ အဲဒီမှာ…ငါးစိမ်းမပါသလောက်မို့ပါ။
ကျုပ်တော့ … ဆာရှိမိဆိုရင်..စားသမှ.. ၀ဆဘိခေါ်တဲ့.. အပူအစပ်တောင် မထည့်ဘူး.. ဒီအတိုင်း..ဒီအတိုင်း..။
Brain Maggots / Sushi Worms – Analysis
While medical experts agree that the stories accompanying these disturbing images are fictional, debate over the authenticity of the photographs themselves is ongoing.
When I showed them to pathologist Dr. Ed Friedlander, he concluded they must have been faked, largely because the anatomical landmarks one would expect to find inadissected human brain are absent. Another expert has speculated that the photos could be real, but, if so, document an extremely serious case of scalp cancer, nota“brain infection.
အခု ဦးနှောက်ထဲက အကောင်တွေက ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး.. ဆူရှီ အစားများတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး BC ကငှားဖတ်တဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ တခါဖတ်ဘူးတယ်.. ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ဆုံး သံကောင် ပိုင်ရှင်က ဂျပန်က ဆူရှီ စားတဲ့ ဂျပန်ကြိး ဖြစ်နေတယ်လို့ ဖတ်ခဲ့ရဘူးတယ်။ ဖတ်ခဲ့ရတာတော့ တော်တော် ကြာပါပြီ အရှည်ကိုတော့ မမှတ်မိဘူး သူကတော့ ဥပမာပေးပြီး ပြောတာ ကားအသေး ၆စီး ဆက်လိုက်ရင် အရှည်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာတော့ မှတ်မိတယ်။ ပုံလေးနဲ့တောင် ပြထားသေးတယ် စလွန်းကား ၆စီး ဆက်ပြထားသေးတယ်။ ထူးခြားတဲ့ စာလေးမို့ နဲနဲ မှတ်မိနေတာပါ။ အဲဒါလေး ရှာလိုက်အုန်းမယ်.. တွေ့ရင် ဒီမှာ ဘာသာပြန်ပြီး တင်ပြပေးပါမယ်။
ဖြစ်တာ၊မဖြစ်တာ အသာထားလို့ အဲဒီပုံကြီး ဘယ်ကရသလဲ။ပုံကြည့်ပြီး ယားကျိကျိ နဲ့ ထမင်းစားချင်စိတ်တောင် ပျောက်တယ်။:(